Taariikhda My Butros » Afar Common dhibaatooyinka xiriirka
Jacaylku waa wax cajiib ah sida ah! Waa sababta aan ku qaataan noloshooda nus isku dayaya in la helo mid ka mid ah. Laakiin marka aan samayn in uu yahay qeybtii kaliya sheekada. Waxaa nagu waajib ah in ay dhib noo jidka xiriir kasta laakiin waxaa jira siyaabo in ay isku dayaan in ay xaliyaan kuwaas oo aad u dhan caadiga ah ee arrimaha kaas oo aan wajahno. Xusuusnow in dhamaadka maalinta aad tahay iskaashi iyo haddii aan arimahaan waxaa ka weyn waxa aad ka dibna wada leeyihiin run ahaantii aad ka qabto gaar ah wax. La dagaallama in ay qabtaan waxa ay u gal. Halkan waa afar dhibaatooyin caadi ah oo dadka ka fool cilaaqaadyada iyo sida ay suurtogal tahay xalinta.
Isgaarsiinta malaha waa dhibaatada ugu badan xiriirka jiro. Waxaa jira arrimo badan oo taas ma kici lahaa in xiriir halkaas oo laba qof ku yaalaan bogga isla barbar dhigo in dadka aan ku jira. Caqabadaha Isgaarsiinta na looga hortago ka qaadan weyn oo ka sii adag ay dhab ahaan yihiin ka hortagga xaaladaha. Haddii aad adiga iyo lammaanahaaga la helo in carqaladahaasi ka jira xiriirkiina jidka loo Habkan waa la furan ah, wadnaha daacad ah oo aan ku xukumayn. In badan oo dabka lagu darayaa shidaalka ee xaaladahan ayaa ah la'aanta fahan oo dhexmara laba qof iyo xukummadayda awgeed samaynta qofka aan dhagaysto ay dhinac oo sheekada. Isku day inaad fadhiistaan ​​oo la hadal, hadalka, hadalka.
Doonaya waxyaabo kala duwan
Haddii ay tahay wax ka yar sida halkaas oo inuu tago, halkaas oo in la cuno, iwm … arrimaha ama ka weyn sida meesha ay ku noolaadaan, in si wada nool yihiin ama ay guursadaan ama haddii aad caruurta ama ma doonayaan wax ka duwan waa dhibaato xiriir weyn. Oo waxay ka dhici doontaa in qaab ama mid kale sababtoo ah inkastoo aan ka mid yihiin marka aynu nahay qofkaasi gaarka ah ee nolosheena waxaan weli ku jira shakhsiyaad habka fikirka noo gaar ah iyo qorshayaasha sida aynu u aragno nolosheena jeestay baxay. Taasina waxay keentaa in khilaaf sababtoo ah waxaan iyaga ka aragtid sida qaadidda waxa aan dooneyno oo haddii aan hayo ee u muuqdaan in ay iyaga ka caraysan for this. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waxaa mar kale la hadlo, laakiin waxa kale oo aad u baahan tahay in ixtiraamka waxa ay doonayaan, e.g. dad badan oo raba in ay guursadaan qabaa in guurka waa ka xoogbadan, iyo in ka badan habboon badan halkaas oo ay wada nool yihiin in qof kasta oo raba in ay wada noolaadaan waxna ma arkaan waxyaabo la mid ah. In si kale loo dhigo, aad rabto inaad wax ka duwan, ma “fiican” wax iyo in loo baahan yahay in la soo xusuusto ama haddii kale dadka dareemaysaa in aad ka eryid ama xataa Dullayn sida ay u fikirayaan waa xaq. Meel Dhexe sidoo kale waa furaha halkan. Waxaad u baahan tahay taas in xiriir kasta. Just hubiyo waa lacag isku mid ah u dhimin sameeyo mid kasta oo qaybo aad.
Lacagtu waa xididka xumaatooyinka oo dhan sida ay iyagu yidhaahdaan, iyo in ay xiriir waxay noqon kartaa sun ah oo xajisa yaynana kolna. Waxaan ku noolahay times biya-fadhiisinka iyo shaqooyin aan la heli karin inta badan. Dadka ayaa ku dhibtooneysa oo wuxuu dhigay kartaa dhaawac ku saabsan xiriirka taas oo dabiici ah oo keliya. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa mid kasta midka kale ku dhiirigaliyaa, midba midka kale tusi aad aaminsan tahay in midba midka kale iyo in si wadajir ah aad soo bixi karo oo dhanka kale sababtoo ah danbeyn doono inaad. Laakiin Intaa ka doodaya qofka aad jeclaan badan adduunka ee aan la socday si ay u xaliyaan wax. Haddii wax ka dhigi doonaa wax kaliya hal milyan oo jeer ka xun.
Kuwani waa arrimaha dhib badan qof walba inaad ogaato wixii aad samayn in marka ay daawashada lammaanahooda ee la yaabnaa quusasho badan sida. Life aad u badan ee qof kasta oo siyaabo kala duwan oo ay dadka qaar la qabsan karaa fiican yihiin kuwa kale. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa ay jiri iyaga, ku tusin aad aaminto in si uu uga gudbo hana dhihina aflagaada off sare ee madaxa, kuwaas oo iyaga ka dhigi doonaa xitaa dheeraad ah hoos ka badan ay horey u yihiin.